Guddiga doorashooyinka JSL oo Sharraxay Shuruudo laga Rabo Dadka Degmo-beddelka & Kaadh-deddelka loo Samaynayo | Aftahan News
Guddiga doorashooyinka JSL oo Sharraxay Shuruudo laga Rabo Dadka Degmo-beddelka & Kaadh-deddelka loo Samaynayo
Hargeysa(aftahannews):- Guddiga doorashooyinka Qaranka Somaliland. ayaa shaaciyay wakhtiga rasmiga ah ee ay bilaabmayso kaadh bedelashada degmo ilaa degmo iyo fursad la siiyay dadkii ay kaadhadhku kalumeen.
Guddiga Doorashooyinka Somaliland 2021
Guddoomiyaha Komiishanka doorashooyinka Somaliland Cabdirashiid Maxamuud Cali (Riyo-raac), waxa uu sidaa ku sheegay mar uu maanta xarunta Guddiga doorashooyinka ee Hargeysa oo Guddigu kulan ku lahaayeen kula hadlay qaar ka mid ah warbaahinta.
Guddoomiyaha Komiishanka Doorashooyinka Somaliland ayaa cayimay wakhtiga rasmiga ah ee ay bilaabmayso kaab bedelka degmo ilaa degmo, waxaanu yidhi; “Komiishanka doorashooyinka qaranku waxa uu soo kordhiyay wixii ka danbeeyey sannadkii 2016-kii dadka reer Somaliland ah ee u kala guur-guuray Magaalooyinka in la siiyo fursad ay ku bedeshaan deegaankooda. Waxa bishan 15-keeda 2021 la furi doonaa kaadh-bedelkii oo ah degmo ilaa degmo. Dadka yaanay ka khaldamin qofna degmada gudaheeda kama bedelen karo,laakin degmo ilaa degmo 23-ka degmo ee dalka ayay u kala bedelan karaan.”
“Dadka kaadhadhku kalumeen komiishanku waxa uu u sameeyey inay kaadh bedel helaan oo shahaado ay ku codeeyaan la siiyo, oo halkii kaadhka u galaysa, iyaguna waxay caddaynayaan inuu kaadhkii lumay, siyaabo baddan oo wax loo caddeeyo ayaa jira, ta ugu muhiimsani waxa weeyaan inuu qofkaasi ku dhaarto inuu kaadhkiisi lumay, markaa waa loo bedelayaa.”ayuu yidhi Guddoomiye Cabdirashiid Riyo-raac.
Waxa Guddoomiyaha Guddiga dooarashooyinka oo sii sharraxaya Shuruudaha laga rabo Dadka hawshani khusayso, uu yidhi; “Shuruudaha looga baahan yahay labada-ba oo kala ah: Goob bedel degmo ilaa degmo, iyo kaadh bedelka waxa weeyaan:
Mar uu Guddoomiye Cabdirashiid ka hadlayay shuruudaha looga baahan-yahay qofka uu kaadhku ka lumo waxa uu yidhi “ a). Waa inuu yimaado xarunta ugu dhow degmadiisa ee ay shaqadu ka socoto. b). Waa inuu buuxiyo form-ka codsiga, ee in kaadhkii ka lumay, c). Waa inuu ku dhaarto inuu kaadhkaasi ka lumay oo aanu haysanin.”
Cabdirashiid Riyo-raac, waxa uu intaas ku daray; “Waxaan bulshada ku wargelinaynaa bishan 15/2/2021inay ka bilaabmi doonto 120-goobood oo dalka ku yaala. Markii hore waxay ahayd in degmooyinka oo qudha laga qabto, laakin marku komiishanku eegay baaxada iyo inta uu dhulku isku jirjiro, tiradii waa la kordhiyay iyada o xuduudaha si gaara loo eegay. Markaa 120-goobood ayay ka qabsoomi doontaa. Muddada ay hawshaasi soconayso waa tobban cisho, oo ay goob-kasta ooleyso, afar cisho oo dheeriya, oo ay ooli doonto lixda degmo ee ay caasimaduhu ku yaalaan”.
Guddoomiye Cabdirashiid Riyo-raac, waxa uu sheegay in sannadkan 2021 ciddii gashay diwaangelinta codbixintu inaanay ku jirin shaqadan la qabanayo. “Waxaan shacabweynaha reer Somaliland ka codsanaynaa komiishanka doorashooyinku waxa uu hayaa xil qaran, oo umadda ayuu u hayaa, umadduna iyada ayaa leh shaqadan oo dhammaanteen ayay inaga dhaxaysa, anagu adeegayaal Ayaan ka nahay, haddii aan la isku barbar-taagin komiishanku ceel ma biyeen karo. Sidaa darteed waxaan codsanaynaa in xasiloonida la ilaaliyo, in awaamiirta komiishanka loo dhago nuglaado, in la soo dhaweeyo dhalinyarada jaamacadaha laga keenay, in lala shaqeeyo ciidanka amiga”.
Guddoomiyaha Komiishanka doorashooyinku waxa uu u mahad-celiyay ka qeybgalayaashii diwaan-gelinta codbixiyayaasha,waxaanu yidhi“Komiishanka doorashooyinka Somaliland waxa uu u mahad-naqayaa ka qeybgalayaashii diwaangelinta cod-bixiyayaasa oo ay ugu horeyso xukuumadda Somaliland, qaadhaan-bixiyayaasha ee inaga taageera arrimaha dhaqaalaha,farsamada iyo arrimaha dimuqraadiyada, bulshada rayidka ah, Jaamacadaha, Shirkadaha, bulsho-weynta reer Somaliland, Ciidamada qaranka.”
Riyo-raac, waxa uu uga mahad-celiyay Xisbiyada qaranka Somaliland sidii wanaagsanayd ee ay u la shaqeeyeen mudaddii ay socotay diwaangelinta codbixiyayaashu.